Midowga Yurub iyo IOM oo fashilay beenta Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Yurub iyo IOM oo fashilay beenta Farmaajo
Midowga Yurub, ayaa fashiliyay sheegashooyin aan waxba ka jirin oo Kooxda Farmaajo oo uu ugu horreyeeyo Wasiirka Arrimaha Dibadda, C/saciid Muuse, ku faafiyeen baraha bulshada.
MUQDISHO, Soomaalya – Kooxda Farmaajo u qaabilsan marin-habaabinta bulshada ayaa saacadihii la soo dhaafay si weyn u buunbuuniyay in Xaafiiska Madaxweynihii hore, uu masuul ka ahaa dib u soo celinta ku dhawaad 100 dhallinyaro ah oo shalay dib loogu soo celshay dalka, kuwaas oo muddo ku jiray xabsiyada Liibiya.
Sida ay warka u dhigtay Villa Soomaliya, soo celinta dhallinyarada ayaa timid, kadib kulan dhex maray Farmaajo iyo Madaxweynaha Golaha Madaxtooyada Liibiya, bishii hore, kaas oo lagu go’aamiyay in xabsiyada laga sii daayo muhaajiriinta Soomaaliyeed ee ceegaaga xabsigaya Liibiya, waa sida ay hadalka u dhegeene.
Hayeeshee, Xaafiiska Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa sheegay in soo daabulidda dhallimyarada ay iska kaashadeen hay’adda socdaalka u qaabilsan Qaramada Midoobay ee IOM, taas oo waxba kama jiraan ka soo qaadeysa sheegashada Kooxda Farmaajo ee ku addan in ay fududeeyeen soo celinta 91 muwaadin.
“Hindisaha Wadajirka ah ee Ilaalinta iyo dib u soo celinta muhaajiriinta ee ay ku mdeysan yihiin Midowga Yurub iyo IOM ayaa dhawaan 97 ruux oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah ka caawiyey in ay dib ugu soo laabtaan Muqdisho, kuwaas oo laga keenay dalka Liibiya oo ay ku jireen xabsiyo in ka badan labo sano”. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Midowga Yurub.
Hay’adda Socotada Adduunka (IOM) oo garab ka helysa Qaramada Midoobay, ayaa hore u fududaysay dib u soo celinta in ka badan 2,500 qof oo Soomaali ah oo laga soo daayay xabsiyo ku yaalla dalalka Libya, India, Seychelles, Eritrea, Sudan, iyo Tanzania tan iyo 2018-kii.
Kooxda waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo hoggaamiyo aya caan ku ah sheegashada guulo aysan shaqo ku lahayn, hadalka ka soo baxay Xaafiiska Midowga Yurub ee Soomaaliya, ayaana bannaanka keenaya beenta uu Farmaajo doonayo inuu ku marin-habaabiyo shacabka aan hili karin xogaha daaha ka danbeeya.